Qalisa njani ukuBethelela ukuSungulwa kwabo kwiHunt Hunt | Martech Zone
NgoMgqibelo, uJanuwari 7, 2017 NgoMgqibelo, uJanuwari 7, 2017 UAndrew Gazdecki
Inkqubo yokwazisa ukuqala kulo naliphi na ishishini kwindalo iphela: yiza nombono omkhulu, yenza ingxelo yedemo yayo ukubonisa, ukutsala abanye abatyali mali kwaye emva koko ufumane inzuzo wakube ufikile kwimarike ngemveliso egqityiweyo. Ewe, njengoko amashishini eguqukile, ke nezixhobo zinjalo. Yinjongo yazo zonke izizukulwana ukufumanisa indlela entsha yokuqalisa kuluntu.
Amaxesha angaphambili ayethembele kubathengisi bendlu ngendlu, ukuthumela i-imeyile kunye neentengiso zeTV nakunomathotholo ukumilisela imveliso. Ngelixa ezinye zezo zixhobo zisekhona nanamhlanje, ukujika kwezinto zale mihla kuyafuneka ngokupheleleyo ukuze ukuqala kwesiqalo sanamhlanje kukhe kuveze indawo kwintengiso exakekileyo.
Kudliwanondlebe olwenziwe ngo-2016 no-Alex Turnbull we-Groove, uMsunguli we-Product Hunt kunye ne-CEO u-Ryan Hoover wachaza ifilosofi yakhe, eyadlula kuyise: Khangela umngxunya, uzalise
UHoover wafumana umngxuma omkhulu kwaye weza nendlela yokuwuzalisa. Indawo yokuhlangana yabo banokuqala kokuqalisa, isiza sixhomekeke kwilizwi lomlomo ukomeleza okanye ukwenza buthathaka iimeko ezizodwa ngokunyuka okanye ukuvota kwabasebenzisi. Ukuba unokufumana iivoti ezaneleyo zokususa ukutya okuzayo, apho zonke izinto eziqala khona, uya kudlulela kwiphepha langaphambili lesiza kunye nesondlo esiFakiwe.
Uluhlu lweemveliso ezinikezelwayo zigcwele yonke indawo. Iiteki ziyakonwabela iifowuni kunye neeapps ezihambayo, ngelixa iincwadi kunye nezinye izinto ziyafumaneka ukuze ziqwalaselwe. Kulapho ikhoyo Thumela i-glitter yeentshaba zakho yaqala ngokunjalo. Kwisithuba seeyure ezingama-24 zokuqaliswa kwewebhusayithi ukubetha imithombo yeendaba zentlalo, inzala inyanzelise umenzi ukuba abeke iwebhusayithi iyathengiswa.
Indawo ikhetha ukufaka ukuqala 'okutsha' - hayi iinzame ezivela kubaphuhlisi bokuqala, kodwa izinto ezihlaziywe ngokubonakalayo kwiinkampani ezaziwayo. Baye bavumela abadali ngezinto ezingaziwa kakuhle ukuba bathumele ukuqala kwabo, nangona loo nto ingeyonto intsha kwezobuchwephesha.
Iiapps ezihlaziyiweyo zinokufanelekela ukuba zidweliswe. Ukuba ungumbhali ngakumbi, ukuHanjiswa kweMveliso akunakuba kokwakho, njengoko indawo ingawamkeli amanqaku kunye nezithuba zebhlog. Iinkonzo zekhontrakthi nazo azamkelekanga kwisiza.
Kubonakaliswe ukuba yimpumelelo entle, phantse Abalandeli be170,000 Ku-Facebook naku-Twitter ukusukela ngoMeyi ophelileyo kunye neeprofayili ezisibhozo ze-Twitter.
Ndisaziva ndonganyelwe? Ndineengcebiso zokuqinisekisa ukuba amava okuHuntwa kweMveliso yinto entle:
Khangela Iimveliso ezifanayo
Eli linqanaba lokuqala lokutsiba ngaphambi kokucwangcisa nakuphi na ukumiliselwa kwiHunt Hunt, ngakumbi ukuba uyiposta yereokie. Ukuthatha ixesha lokuphanda kwaye ufumane indlela ezinye iinkampani kunye nabantu abathengisa ngayo umsebenzi wabo, ukuya kuthi ga kwiiteksti, sisiqalo esibalulekileyo. Qaphela loo mabinzana, kodwa ungalibali ukuba bawenze njani iphepha labo lokufika. Yonke into kufuneka ithathelwe ingqalelo ngaphambi kokuthatha umtsi, njengoko ukuziphosa ngokwakho ngaphandle kuya kuphela kwintlekele. Yiba sisilumko.
Xa inkampani yam izama ukumilisela ekuHunteni kweMveliso sasimalunga neminyaka emi-4 ubudala kwaye sasekwa. Sizame konke okusemandleni ethu ukufundisa abasebenzisi ukuba iselfowuni yethu ye-DIY umakhi weapp yayiyinkonzo entle kodwa ukungaveli kwayo ayisiyonto intsha ngokupheleleyo kukhokelela ekubeni singabinakho ukumiliselwa ngempumelelo. Ke, eyona nto iphambili apha, qiniseka ukuba usungula into entsha hayi into esele ibekwe kwiHunt Hunt ngaphambi kokuba ingenaziphumo zintle.
Kuhle ukufunda kwiimpazamo zakho. Kungcono ufunde kwiimpazamo zabanye abantu. UWarren Buffett
Fumana iimpembelelo zakho
Enye indlela eya empumelelweni kwiwebhusayithi kukufumana abachaphazeli-abantu abanokufumana umdla kwisiqalo esitsha esasithunyelwe kwisiza. Kusemgangathweni kwabo banxulumana nenkampani etyhala ukuqalisa ukudubula ii-imeyile kubasebenzi babo ukuze babonwabe ngenjongo yokuvusa imveliso entsha. Kubantu ngabanye, kulungile ukuba wenze okufanayo namalungu osapho kunye nabahlobo. (Nokuba umakazi wakho akayazi i-imeyile. Zonke iivoti zibalulekile, khumbula.)
Kukho imida, nangona kunjalo. UkuHuntwa kweMveliso akuvumeli iinkampani ukuba zithenge indawo kwikhaya lasekhaya. Ayinamsebenzi nokuba irekhodi lomkhondo liyoyikeka kangakanani, kodwa kusafuneka befumene inqanaba eliphezulu ngee-upvotes njengaye wonke umntu.
Gcina isantya engqondweni xa uyila into yeSiza
Ngokungafaniyo neewebhusayithi ezifanayo, i-algorithm yeMveliso yeHunt algorithm ixhomekeke kwisantya. Ngokukhawuleza ukuba iwotshi yesiza ibethe ezinzulwini zobusuku i-PST, usuku olutsha luyaqala kwaye abacoci bevoti abaphezulu bemihla ngemihla bayacocwa. Ke, kubalulekile kwabo baphuhlisi ukuba baqiniseke ukuba yonke into isetiwe kwaye ilungile xa imveliso iposelwe kwaye ukwinceba yabasebenzisi. Ukusukela ukuHanjiswa kweMveliso akuvumeli ukubuyela kwakhona ngaphandle kokuba kwiimeko ezithile (kuchaziwe apha ngasentla), olo suku lunye luthatha isigqibo sokuba ngaba ukuqala kwakho kuyaphumelela okanye kuyasilela.
Uphengululo loMsebenzisi lunokusetyenziselwa ukuNceda
Abaphuhlisi abanobuchule kunye nabaqulunqi basebenzisa uphononongo ukomeleza imveliso. Abaqulunqi baxelele amabali malunga nokuba inguqulelo ye-beta yeapp yabo yefowuni yaphuculwa njani ngokufunda amagqabantshintshi kwindawo kunye nokulungiswa kweebugs. Imveliso ye-FAQ yephepha le-FAQ inyanzelisa ukuba usetyenziso lunokuxhaswa kuphela ukuba uhlaziyo 'lubalulekile' -ezona zinto zibalulekileyo zibalulekileyo endaweni ye-tweak apha okanye apho. Abaphathi boluntu bayakwala uhlaziyo oluncinci, ke gcinani engqondweni.
Imizekelo yeempawu ezamkelweyo ziqhuba i-gamut ukusuka kwi-interface eyandisiweyo ukuya ekunyukeni kokufumaneka kumaqonga amaninzi, mhlawumbi inguqulelo entsha yeselfowuni. Nokuba ilogo entsha iyabala!
Jonga nje IMinibox. Inkqubo yokwabelana ngefayile okwangoku yiminyaka emibini kwi-iteration yayo yesithathu, nge Iinguqulelo ezininzi kumaqonga awahlukeneyo emva kokumiliselwa njengeqonga le-Mac kuphela.
Ixesha lokuSungula kwakho ngokuchanekileyo
Ii-smart webmasters ziya kuqinisekisa ukuba zilungiselela ukwaziswa kwento ngokuchanekileyo. Amabali amanyumnyezi okuqala angalungiselelwanga spike kutrafikhi ngenxa yokuthumela kwiHunt Hunt ziqhelekile, njengokuhambisa umphuhlisi weentshaba zakho zizaliswe ngumdla woluntu.
Qiniseka ukuba xa ucwangcisa ukumilisela, yonke into icwangciswe ngendlela oyithandayo. Ukuba awuzilungiselelanga kwaye unokuba ngabasebenzisi banengxaki ngale app, zilungele ukufumana uninzi lweevoti ezibonisa iibugs kunye nokubamba ngasekhohlo nasekunene. Emva koko ikamva leapp liya kuba sezandleni zabaphathi boluntu xa ubathumela i-imeyile ngohlobo oluphuculweyo.
Abaphathi kufuneka bazi ngayo yonke into oyicwangcisileyo kuhlobo lwe-2.0 ukuze banike okufanelekileyo ukuba baphinde bahlangane. Qiniseka ukuba unemizekelo ekulungeleyo.
Sukuya Wedwa Ngaphandle kwabafowunelwa beMedia
Abasebenzisi beMveliso yeVeteran Hunt bayayazi ngokusungula ukuqala, kwaye banonxibelelwano kumajelo eendaba abanceda ngokwazisa. Oko akuthethi ukuba ngekhe ubalinganise. Ngaba uyazi naziphi na iibhlog okanye intatheli ezigqume imveliso yakho yangaphambili ngophononongo oluqinisekileyo? Uyilo lwe-imeyile ukuze unike ingqalelo malunga nokwaziswa okutsha kwaye ubathumele kunye ngosuku lokuqalisa.
Imiyalezo inokuzenzekelayo ukugcina ixesha elithile kwinto ekufuneka ibe lusuku oluxakekileyo. Yindlela elula yokuqalisa kwesiqalo sakho phambi kwee-eyeballs ezininzi ngokugubungela okukhulu, kwaye ufumane ii-upvotes ezingaphezulu.
Iingcamango zokugqibela kunye neengcebiso
Ukugcina konke oku engqondweni kuninzi ekufuneka kuthathelwe ingqalelo kuye nawuphina umntu, kungasathethwa ke ngemveliso yeHunt Rookie. Ukuba uzilungiselele, ukujongana nayo nayiphi na into ephoswa ngabasebenzisi kukukhawuleza. Ngaba unyanzelwe ukuba ubuye emva kokumiliselwa okukhulu? Akukho ngxaki, masidlulise uhlaziyo kumphathi wethu woluntu. Ngaba awuzilungiselelanga umdla omkhulu kunokuba bekulindelwe? Isifundo esifundwe kwixesha elizayo. Emva kwayo yonke loo nto, abasebenzisi abakhaliphileyo bafunda kwii-hiccups kunye neempazamo zokuba ngcono kwixesha elizayo. Kufanelekile umgudu.
Le mizekelo, intle kwaye imbi, ibonisa indlela enamandla ngayo iMveliso yeHunt. Nawuphi na umphuhlisi ofuna ukumilisela ukuqalisa kuya kuba kuhle ukujonga ixabiso elinikezelwa sisiza. Ukuqaliswa kwemveliso elula kunokuba sisiseko sempumelelo yenkampani. Ukuba ulungele kwaye ukulungele ukuhamba, izibonelelo zoHuntho lweMveliso zezakho ukuba uzonwabele. Umnqweno omhle!
tags: umakhi weappQalisaibhayibhileukuzingela imvelisoukuveliswa kwemvelisoimvelisoqalisaukunyusa ukuqalisa